Ukuphupha ngecawa enkulu Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-cathedral iyaqondwa ukuba yicawa apho ubishophu ehlala khona. Kwi el mundo Ukuthetha isiJamani, iicawa ezininzi zaziwa ngokuba yicahedral okanye icahedral, njengeCologne Cathedral okanye iFreiburg Cathedral. Nangona kunjalo, la magama akafani, kuba asetyenziselwa ukubiza iicawa ezinkulu ezingenabo ubishophu kwaye ke ayizizo iicawe ezinkulu.
Kodwa kutheni icawa yecawa ngoku ibonakala njengomqondiso wephupha? Mhlawumbi oku akuqhelekanga kumntu okholwayo. Kodwa kuthekani ngabantu abangenankolo okanye abangazalaniyo nenkolo yabo? Ukutolika kwamaphupha kulutolika njani olu phawu?
1 Uphawu lwephupha «icahedral» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «icahedral» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «icahedral» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «icahedral» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "icawa enkulu" lubhekisa kwi fumana ukusuka ephupheni leempendulo kwihlabathi elivukayo. Ukuphupha kunokwenzeka ukuba kukwingxaki ebalulekileyo kwaye ke kukukhangela intsingiselo yobomi bakho. Kananjalo kulo mfuziselo wephupha ukulangazelela iphupha lomcebisi okanye isikhokelo ekuvuseni ubomi kunokubonakaliswa. Unesithukuthezi kwiingxaki zakho kwaye ufuna uncedo lomnye umntu kunye noncedo.
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kuyazazi iimeko ezininzi zamaphupha ngokunxulumene nomqondiso wephupha "icawa enkulu", enokuchazwa ngokwahlukileyo. Ukuba umntu ophuphayo ubona ephupheni i-cathedral enkulu enedome, ethe tyaba esibhakabhakeni, uya kukwenza oko kungekudala. nomona ukuba kwinto ethile okanye komnye umntu kwihlabathi elivukayo. Kananjalo umnqweno wakho wokungafumaneki awuyi kukuvumela ukuba wehlise umoya. Kuya kufuneka uzame ukufumana uxolo lwangaphakathi. Ukuba iphupha lingena kwi-cathedral ephupheni, liya kuphakama liye kwizinto eziphezulu kwikamva elikufutshane, kwaye inkxaso yabantu abakrelekrele ikhuselekile kuyo. Nangona kunjalo, lo mxholo wephupha unokulumkisa nangeengxaki zosapho.
Ukuthandaza kwicawa enkulu ephupheni kufanekisela ukuzaliseka kwethemba ebomini bokuvuka. Icawa enkulu yokuwa njengomqondiso wephupha inokusetyenziswa njenge isilumkiso ukuba iqondwe xa ujongene neengozi ezingalawulekiyo. Ukuba indlela eya kwicawa enkulu yamaphupha ivaliwe, umphuphi kufuneka aqale ajongane neengxabano okanye ubunzima ukuze aqhubele phambili ebomini bakhe.
Ukuba uhleli kwi-cathedral ephupheni lakho, ufuna uxolo kunye nokulingana kwangaphakathi ebomini bokuvuka. Ukuba uthatha inxaxheba kumsitho wobudlelane kwindlu yecawa enkulu, akusoloko kufuneka wenze ngokungxama.
Uphawu lwephupha «icahedral» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kutolika ikhedralali ephupheni njengophawu lomnqweno wephupha lonxibelelwano kunye Imikhosi ebalulekileyoezikuvumela ukuba ube namava obomi anzulu. Kuba icahedral inenjongo yenkolo, ukuphupha ubona ukuguqula inkolo ngendlela eyiyo. Isimboli yamaphupha "i-cathedral" inokubonisa indawo yokusabela kumaphupha. Kungenxa yokuba apha ungabelana ngokholo lwakho nabanye abantu kwaye ke uzive uqhagamshelene nabo ngendlela ethile.
Uphawu lwephupha «icahedral» - ukutolika kokomoya
Ngaphakathi ekutolikeni amaphupha okomoya, i-cathedral ibonakalisa njengophawu lwephupha yonke into ephawula ixesha lamaphupha. kubalulekile y santo es.